Chakavanzika cheSoftware Indasitiri | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 4, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Inguva inonakidza kuve muindasitiri ye software. Ne dot com boom uye bust, uye ikozvino "webhu 2.0" uye pasocial network munzvimbo huru, isu tichiri muhucheche hwedu asi tichikura.
Padanho regiredhi, ini ndingati isu zvimwe takatenderedza 9th giredhi. Tichiri kusagadzikana muganda redu, tinonakidzwa neiyo software inotaridzika kunge 'yakanyanyisa kukura', uye isu tiri kungotanga kuvaka hushamwari hunogona kutarisira hupenyu hwese.
Vatengi vari pakupedzisira kuwana zvakakomba ne software yedu. Vane maneja vechigadzirwa vari kupedzisira vawana kuravira kwakanaka - vachirumbidza chigadzirwa chakakura chine dhizaini iri kutengesa uye kushambadzira kwakakodzera.
Izvo zvakati, kunyepa kwekutenga software kuchiripo. Kana iwe ukatenga mota nyowani, iwe unowanzo ziva kuti ichave yakasununguka, tasva mushe, kuti inokona sei uye kuti inomhanyisa sei kubva chete kubva ku test drive. Kana iwe ukaverenga nezvazvo mumagazini yemotokari nemutori wenhau mukuru, unowana kunzwa chaiko nezvekuti mota ichanzwa sei usati wambopinda mairi.
Software ine bvunzo dhiraivha uye ongororo futi, asi ivo havafi vanorarama zvinoenderana zvatinotarisira, handiti? Chikamu chedambudziko ndechekuti, nepo mota dzichienda kumberi, kumashure uye dziine madhoo nemavhiri, software haiteedzere mitemo imwechete… uye hapana vanhu vaviri vanoishandisa zvakafanana. Izvo hazvisi kusvikira isu tanyura mune yedu yezuva nezuva basa ndipo patinoona izvo zviri 'kushaikwa' nechishandiso. Yakarasikirwa paakagadzirwa. Yakarasikirwa payakagadzirwa. Uye zvakaipisisa, zvinogara zvichirasikirwa mukutengesa.
Izvi zvinodaro nekuti iwe neni hatitenge software yekuti tichaishandisa sei. Kazhinji nguva, isu hatitombozvitenge zvachose - mumwe munhu anozvitengera isu. Iyo software yatinoshandisa inowanzo kuverengerwa nekuda kwehukama hwehukama, dhisikaundi, kana maitiro ainoita neayo mamwe masisitimu. Zvinondishamisa kuti kangani makambani ane nzira yakasimba yekutenga, zvitupa zvinodikanwa, zvibvumirano zvedanho rebasa, kutevedza chengetedzo, kuenderana kwehurongwa… asi hapana chaicho tizvishandise iko kunyorera kusvika kwenguva refu mushure mekutenga nekuitwa.
Zviri, pamwe, chimwe chezvikonzero nei pirating software yakanyanya kuwanda. Ini handidi kana kuverenga kuti mangani zviuru zvemadhora esoftware yandakatenga iyo yandaishandisa ndikasiya, uye handina kuzomboishandisa zvekare.
Iyo Maonero kubva kuSoftware Kambani
Maonero kubva kune software yekambani akasiyana zvachose zvachose! Kunyangwe zvikumbiro zvedu zvichiwanzo gadzirisa dambudziko rekutanga uye ndosaka vanhu vachiibhadhara… kune nyaya dzakawanda kwazvo dzekunze uko dzatinofanira kufunga nezvadzo patinenge tichigadzira.
Inotaridzika sei? - zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, software is makwikwi erunako. Ini ndinogona kunongedzera kune akawanda mafomu ayo anofanirwa kuve 'ake' iwo musika asi usatomboita kucheka nekuti vanoshaya aesthetics inobata iyo misoro.
Inotengesa sei? - dzimwe nguva maficha anotengeswa, asi kwete chaizvo izvo zvinobatsira. Muindasitiri yeemail, pakanga paine kusunda kukuru kwechinguva ikoko kwe RSS. Wese munhu aikumbira asi maPail Service Provider chete ndivo vaive nazvo. Chinhu chinosekesa ndechekuti, gore rinotevera, uye hachina kugamuchirwa mune zvakanyanya nevashambadzi veemail. Icho chimwe chezvinhu izvo zvinotengeswa, asi hazvinyatso kubatsira (zvakadaro).
Yakachengeteka zvakadii? - ichi ndechimwe chezvinhu 'zvidiki' zvinofuratirwa asi zvinogona kugara zvichinyudza chibvumirano. Sevapi ve software, isu tinofanirwa kugara tichivavarira kuchengetedzeka uye tichiita kuti itsigirwe kuburikidza nekuzvimiririra kuongororwa. Kusaita saizvozvo kusaremekedza.
Yakasimba sei? - zvinoshamisa, kugadzikana hachisi chinhu chakatengwa - asi chinoita kuti hupenyu hwako hunetseke kana iri nyaya. Kugadzikana ndiko kiyi kune mukurumbira wekushandisa uye purofiti. Chinhu chekupedzisira chaunoda kuita kubhadhara vanhu kuti vakunde nyaya dzekugadzikana. Kugadzikana zvakare iri zano rakakosha rinofanirwa kunge riri panheyo yekushandisa kwese. Kana iwe usina hwaro hwakasimba, urikuvaka imba inozoputsika nekudonha rimwe zuva.
Inogadzirisa dambudziko ripi? - ndosaka iwe uchida iyo software uye kuti kana kwete kana ichizobatsira bhizinesi rako. Kunzwisisa dambudziko uye kugadzira mhinduro ndosaka tichienda kubasa mazuva ese.
Chakavanzika cheindasitiri ye software ndechekuti HATITENGESE, tenga, tenga, tengesa uye shandisa software zvakanaka. Tine nzira refu yekufamba tisati tapedza rimwe zuva uye tozviita zvese nguva dzose. Kugara mune ino indasitiri, makambani anowanzo fanirwa kugadzira maficha uye chengetedzo yekutengesa, asi kuzvipira kushandiswa uye kugadzikana. Mutambo une njodzi. Ndinotarisira kumakore gumi anotevera uye ndinovimba kuti takura zvakakwana kuti tiwane mukana wakaringana.
Basa rako riri Kushanda Iwe here? Vangani Vashandi?
Sep 5, 2007 pa 9: 51 AM
Mumwe wemibvunzo yakaoma yandakamboda kupindura ndewekuti, "Kana iwe ukaidaidza kuti software yeinjiniya, nei usingakwanise kuva nemhedzisiro yezvirongwa zvako."
Mhinduro yangu yakafanana nezvamunotaura pano. Iyi indasitiri nyowani nyowani. Zvakatitorera zviuru zvemakore kuti tidzokere pakanga pawana vaRoma neinjiniya. Imwe yenguva dzandaifarira muItaly yaive yekushanyira iyo Pantheon muRome uye ndichiona gomba iro Brunelleschi anofungidzirwa kucheka gomba kuti aone kuti maRoma akamisa sei dome rakakura kudaro (sezvaaiyedza kufunga kuti opedza sei Duomo muFlorence ).
Isu tiri chirango chechidiki uye zvinotora nguva tisati tagadzira software yemhando yepamusoro nenzira inowirirana. Ndosaka vagadziri vachiri kutariswa semhando dzemashiripiti. Tinofanira kudzora zvakanyanya sezvatinogona (kuratidza kukambaira, kubvumira vatengesi kutyaira mapurani esoftware, manejimendi akashata), asi isu hatigone kuzunza chokwadi chekuti mamwe ma software anayo uye mamwe haazi. Kusvika ipapo, ino inguva yekumhanyisa yegoridhe!
Sep 10, 2007 pa 9: 54 AM
Iyo yakanyanyisa kuvandudzwa pfungwa ndeyechokwadi muWebhu 2.0 Zvinoita kunge makambani mazhinji ari kugadzirwa akatenderedza 1 chigadzirwa icho iwe chausingafunge kuti chingakwanise kuchengetedza kambani izere… saka, inogona kuwana (izvo zvakanaka kukambani) kana iyo fizzles kunze mushure mekurerwa zvishoma.
Sep 15, 2007 na4: 00 PM
Ini ndinobvumirana zvachose nepfungwa yekuti software indasitiri haina kunyatso kuvandudza kusvika padanho rainofanirwa kuve isati yagona kudzora kuti software igovewi kumutengi. Ndiri kureva kunyatso kwayo kana iwe uchiti software inoshandiswa zvakasiyana neumwe neumwe mutengi uye saka inogara isingagutsi munhu wese. Pfungwa ye pirated software inomuka nekuda kwekusagutsikana kwemutengi nekuti iwe kurudyi unobhadhara mari yakawanda kwazvo kune software uye woishandisa wozoisiya pamusoro uye usazomboishandisa zvakare uye ndinofungidzira kuti zano iri harina kukwana kana uchitaura nezvekushandisa mari pane chimwe chinhu chingangoita kwenguva refu. Saka pakupedzisira pfungwa iyi ndeyechokwadi kudzamara tave kugona kuenderana mukutenga, kuvaka, kushambadza, uye kushandisa software isu hatigone kumisa aya mazano asiri iwo kuti abude.